Nzira yekuziva sei kana iri rudo kana hushamwari ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Kuziva sei kuti rudo kana ushamwari. Zvakajairika kunzwa kuvhiringidzika kana isu tiri mune iyo yakakurumbira «nzvimbo yeshamwari«. Unozvibvunza kuti: Unoziva sei kana hushamwari chete kana kuti zvimwewo? Unoda kuziva kuti uri muhushamwari here kana kuti munhu waunoitira hanya ane mashavishavi mudumbu kana akakutarisa? Kuti uve nechokwadi, verenga chinyorwa ichi kuti uwane mazano uye uwane zviratidzo zvisinganzwisisiki zvekufarira kwevarume.
1 Nzira yekuziva sei kana iri rudo kana hushamwari kuburikidza nezvimwe zviratidzo
1.1 1. Rinokuudza zvose
1.2 2. Taura nezvemumwe munhu
1.3 3. Anokupa mazita emadunhurirwa
1.4 4. Unongova pfudzi rokuchemera
1.5 5. Inzwa kutya padivi pako
1.6 6. Edza kuita saCupid
1.7 7. Kubata muviri
Nzira yekuziva sei kana iri rudo kana hushamwari kuburikidza nezvimwe zviratidzo
Ziva kana rwuri rudo kana hushamwari kuburikidza nezviratidzo
Zvechokwadi, nyaya imwe neimwe yakasiyana. Vanhu vanoita zvakasiyana uye vanoitawo zvakasiyana. Zvisinei, pasinei neizvi, zvinogoneka tsvaga zvimwe zviratidzo kuti unzwisise kana paine chimwe chinhu kana kuti hushamwari hwakanaka.
Izvo zvakakosha kuti zvijekese kuti hapana chekushandisa kuwana paranoid uye kufunga kuti chero ruzivo chiratidzo: chemistry uye kuwirirana pakati pako zvakakosha zvakanyanya kupfuura chero bhuku rekushandisa kana gwara. Asi zvisinei, nguva dzose zvakanaka kunongedzera mamwe mapfundo anowanzotanhamara muvanhu vose kana vachifarira mumwe munhu.
1. Rinokuudza zvose
Gara uchifunga: ndiwe here shamwari yako inotendeukira kwaari kuti ataure naye pavanenge vaine matambudziko? Zvichida uri munharaunda youshamwari. Kana shungu dzichidzokororwa, pane a mweya wezvakavanzika uye manzwiro. Saka kana nguva dzose govera zvachose zvese zvinoitika muhupenyu hwako newe, haasi kuita kakuyedza kukufadza kana kugadzira mafungiro ekufungidzira. Zvingangodaro kukuona seshamwari chete.
2. Taura nezvemumwe munhu
Paunozvibvunza kuti: Unoziva sei kana hushamwari chete kana kuti zvimwewo? Zvichida ichi ndicho chiratidzo chakajeka chokuti mumwe munhu anokuona seshamwari. Kana iwe ukatanga kutaura nezvekuva murudo nemumwe munhu, iwe zvechokwadi uri munharaunda yehushamwari. Ndizvo zvazvinoitawo paanokukumbira mazano orudo asingambofungi kuti ungamufarira.
3. Anokupa mazita emadunhurirwa
Kana ari type iyoyo anokudana nemazita akanaka ekuti "sisi kana mukoma", ungasanzwa kuda kukuru kwakadaro pamusoro penguva yemberi inooneka. Izvozvo hazvirevi kuti mukomana kana kuti musikana wacho haambofi akakuona nemaziso erudo, asi kuti iye zvino wangova shamwari.
4. Unongova pfudzi rokuchemera
Chimwe chinoratidza kuti uri chikamu cheushamwari kana munhu wacho akatendeukira kwauri apo humwe hukama hunopera. Fungisisa pamusoro pemamiriro ezvinhu aya, nokuti zvinogoneka izvozvo ingova pfudzi reushamwari rekuchemera mumamiriro ezvinhu akaoma kubata.
5. Inzwa kutya padivi pako
Ichi ndicho chimwe chiratidzo chakajairika chenzvimbo yeushamwari. Kana manzwiro acho ari erudo, zvakajairika kuti munhu wacho anzwe achitya. Kana achiita seasina kugadzikana, anotanga kuseka zvinhu zvisingasekesi, kana kuedza kukufadza neimwe nzira, chiratidzo chokuti zvichida rudo urwu runopfuura ushamwari. Muukama hwoushamwari, munhu wacho haaiti nhamburiko yokuedza kuorora kana kuti kufadza mumwe munhu.
Chimwe chiratidzo chekare choushamwari ndepaanotaura zvinhu pasina kunyanyonetseka pamusoro pokuti uchaita sei kune zvaanotaura, ndiko kuti, hapana kunetseka pamusoro pokuti uchaita sei.
6. Edza kuita saCupid
Unoziva sei kana hushamwari chete kana kuti zvimwewo? Ichi chiratidzo chiri nyore! Uri kutaura nezvemumwe munhu anoenderana newe here? Wakamboedza kufambidzana nomumwe munhu here? Chimwe chiratidzo chenyevero. Naizvozvo, gara uchiteerera kune iyo tsanangudzo kana, zvakatonyanya, kana iwe paunobuda, iwe unotora shamwari nekuti iwe unofunga iwe unogona kuita vakakwana vaviri.
7. Kubata muviri
Kana manzwiro acho ari maviri, zvinowanzoitika tsvaga caresses uye kubatwa kwepanyamaPamwe mumutambo kana sechikonzero chekuve pedyo nemumwe. Kana izvi zvikasamboitika kwauri, kunyangwe paine mukana, imhaka yekuti haana chinangwa chekuchengetedza kutarisisa chaiko.
Mutauro wemuviri unotaura zvakawanda nezvemumwe munhu, asi iwe unofanirwa kuzviteerera. Gara wakangwarira kuti usafunge kuti zvese zvinoitwa nemusikana nemuviri wake chiratidzo chekufarira nekuti unogona kuita paranoid woona zvibodzwa pasina chinhu.